White Aluminium oksayidi - China Shanghai Bosun Abrasive
Stainless Sika Wire Hot
White Aluminium nitric
Shot copper / Copper Sika Wire Shot
Brown Aluminium nitric
IIMPAWU A uhlobo kwezindlela abrasive.3 igcwala 2 aluminiyam (Al2O3) umxholo kwe-98%, kunye nokwakheka ezifana equlethe imali encinci oxide ferric, lesilicon oxide, appera emhlophe. oksayidi aluminium amhlophe uhlobo refractories eziphakamileyo kwibakala, wenziwa alumina kwizinga eliphezulu eyenzeke ngaphezu 2000 i-aluminiyamu oxide uhlalutye electric arc somlilo kobubi. Oku emhlophe kunye engundoqo yikristale kwisigaba alphaAl2O3. Le alumina emhlophe yenziwa titling electric arc neziko unalo advantag ...
A uhlobo kwezindlela abrasive.3 igcwala 2 aluminiyam (Al2O3) umxholo kwe-98%, kunye nokwakheka ezifana equlethe imali encinci oxide ferric, lesilicon oxide, appera emhlophe.
oksayidi aluminium amhlophe uhlobo refractories eziphakamileyo kwibakala, wenziwa alumina kwizinga eliphezulu eyenzeke ngaphezu 2000 i-aluminiyamu oxide uhlalutye electric arc somlilo kobubi. Oku emhlophe kunye engundoqo yikristale kwisigaba alphaAl2O3. Le alumina emhlophe yenziwa titling electric arc neziko has inzuzo ezixineneyo ezimbaxa kunye porosity ephantsi uzinzo umthamo kunye nokumelana kukothuka thermal kungaphuculwa.
ubungakanani uhlalutye: 12 # -220 #
1. unyango kumphezulu yodongwe
3. Ukusila / ipolishi
4. White Aluminium nitric
Ixabiso elidityanisiweyo (%)
umxholo wenkqu magnetic
Abrasives kophethe abrasives Camera
1.lapping, ipolishi, zokuhombisa ithayile non-skid, kunye ukuqhumisa ingcinezelo.
unyango 3.Surface / saphela
iseramikhi ezizodwa 5.Ceramic Tiles
6.Fluidized emlilweni Bed and Ulusu / Care Dental
7.grinding carbon sentsimbi ophezulu,-high speed zentsimbi nensimbi ebandayo
Previous: Shot copper / Copper Sika Wire Shot
Next: Stainless Sika Wire Hot
Sand ukuqhumisa Medium
ubukhulu Sandblasting Media Market expecte ...
2016-08-15 ubukhulu Sandblasting Media Market Kulindeleke ukuba lukhule 6,5% CAGR ukususela ngo-2016 ukuya 2023. yesayizi yemakethi sandblasting eendaba Global, ngokubhekiselele umthamo, kulindeleke ukuba lukhule nje phantsi ...